Manana Syndrome Imposter ve ianao? Ireto eritreritra 13 ireto mety hanoro hevitra anao… - An-Tsaina
Manana Syndrome Imposter ve ianao? Ireto eritreritra 13 ireto mety hanoro hevitra anao…
Imposter Syndrome dia misy fiantraikany amin'ny maro amintsika, manomboka amin'ny olo-malaza sy amin'ireo manana asa be loatra ka hatramin'ny ray aman-dreny sy tanora tanora. Mety hisy fiantraikany amin'ny fifandraisantsika isan'andro sy amin'ny fomba ifandraisantsika amin'ny hafa koa izany.
Ity toe-javatra ity dia misy ifandraisany amin'ny hevitrao hahatsapa toy ny hosoka - hoe tsy mahomby ianao dia tsy ampy, tsy misy mari-pahaizana ary efa ho fantatra.
Mety mijaly amin'izany fijaliana ara-tsaina miteraka fahatokisan-tena izany ve ianao? Raha toa mahazatra anao ny ankamaroan'ireto eritreritra manaraka ireto dia mety ny eny.
1. Tsy hitanao ny herinao manokana.
Ity dia famantarana mahazatra an'ny Imposter Syndrome. Betsaka izay sahirana amin'izany no tsy mahita ny tanjaka sy ny fahaizany manokana. Na momba ny asa, ny fifandraisanao, na ny andraikitrao amin'ny maha-ray aman-dreny na mpikarakara anao, dia tsy ho hitanao ny fahaizanao. Ny olon-kafa kosa dia mahita an'io, ary manonona ny fahaizanao sy talenta anananao aza, saingy mandà ny hanokatra ny masonao amin'ny fahamarinana ianao.
2. Matahotra ianao fa lany ny vintana.
Ny ampahany amin'ny Imposter Syndrome dia mahatsapa fa toa hosoka ianao. Mino ianao fa eo an-tampon'ny 'fahitana' foana ianao na ho lany tampoka ny vintanao ka havela tsy hanana na inona na inona ianao. Ianao fotsiny miandry ny denaria hilatsaka amin'ny fotoana rehetra vonona ny tsirairay hahatsapa fa tsy ianao ilay olona noheverin'izy ireo ho ianao.
famantarana fa havelany ho anao ny vadiny
Ny fahombiazanao, raha mahita azy ireo toy izany ianao dia mikorontana avokoa. Tsy mety hoe niasa mafy ianao na nahavita tsara - tsy maintsy satria nandoka ny lalanao tamin'ny vokatra tsara ianao, na ny kisendrasendra tampoka dia nahatonga ny zavatra niasa taminao.
3. Mahatsapa ianao fa miasa mafy kokoa noho ny olon-drehetra.
Matetika ianao no mahatsapa ho toy ny hoe mila ezaka bebe kokoa noho ny olon-kafa ianao vao mahavita vokatra mitovy. Azo inoana fa tsy izany ny zava-misy, saingy tsy afaka manampy ny eritreritra hiditra ao an-tsainao ianao.
Mahita ny hafa manao zavatra ianao ary manontany tena hoe maninona no mora ho azy ireo izany, na dia matetika manana izany fiheverana anao izany aza ny hafa. Mahatsapa ianao fa mila manery ny tenanao mafy kokoa noho ny hafa manosika ny tenany satria manafina ity tsiambaratelo lehibe ity ianao amin'ny tsy fahaizana sy tsy misy saina tanteraka.
4. Tsy afaka mandray dera na dera ianao.
Maharary ianao isaky ny manandrana midera anao ny olona iray. Amin'ny ankapobeny dia misy ifandraisany amin'ny asa izany, fa afaka mivelatra amin'ny lafim-piainana rehetra. Mety ho sarotra aminao ny mahita ny tenanao ho toy ny ray aman-dreny tsara, na sefo na mpiara-miasa tsara, ka isaky ny misy olona midera anao dia mieritreritra ianao mandainga izy ireo .
5. Mampihena ny fahombiazanao ianao.
Sarotra aminao ny hanaiky fa mety nanao zavatra tsara ianao ka mandà tsy hanaiky ny fahombiazanao. Fa kosa, manala azy ireo ianao ary manome voninahitra ny olon-kafa. Raha tokony hijoro amin'ny masirasira ianao dia manery olona hafa hiditra ao anatiny ary hikorontana any ambadiky ny valalabemandry. Mahatsiaro ho tsy mendrika ny fahombiazana sy dera ianao, ka aleonao omena olon-kafa izany.
6. Mpiasa miasa ianao.
Hitanao fa miasa tsy tapaka ianao satria fantatrao fa tsy ho ampy tsara mihitsy ny asanao. Na dia mijanona tsy miasa matetika aza ny sasany raha vao tratra ny tanjona dia manery ny tenanao hiasa sy hiasa foana ianao. Izany dia tsy mirona hitarika be, na izany aza, ho valiny amin'izany ezaka rehetra izany matetika ny lembalemba aorian'ny teboka iray.
Na dia tsy mahazo be aza amin'ny asa mihoatra ny ora, tsy afaka manakana ny tenanao tsy hanao izany ianao. Azo inoana fa fantatrao io toetra io, satria maro ny hafa no mety nanondro ny fihetsikao. Na eo aza izany dia manohy manery ny tenanao tsy tapaka ianao.
7. Perfectista ianao.
Raha tsy tonga lafatra dia tsy faly ianao. Noho ianao mahatsapa tena ho tsy ampy loatra dia mahatsiaro tena ho tonga lafatra tanteraka ny zavatra rehetra ataonao. Manahy mafy ianao sao tsy ampy amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainanao ka ny fahalavorariana dia toa ny fomba tokana sendra azy amin'ny fomba tsara. Mihazona fenitra avo tsy misy dikany ianao izay tsy tratra mihitsy.
Famantarana 11 fa mafy loatra amin'ny tenanao ianao (sy ny fomba 11 hijanonana)
8. Tsy safidy ny tsy fahombiazana .
Ity dia mifandray amin'ny maha-tonga lafatra anao, satria tsy azonao akory ny tsy tsara amin'ny zavatra iray. Io fahatsapana io dia mitatra amin'ny fiainanao, ao anatin'izany ny asa, ny fisakaizana, ny fifandraisana ary ny fiainam-piaraha-monina. Mihoron-koditra ianao noho ny tsy fahafahanao manao zavatra ary miasa ao anaty tebiteby amin'ny zavatra kely indrindra.
Na dia mety mijery am-pahamendrehana asa sasany aza ny hafa ary manaiky fa tsy afaka ny ho tonga lafatra indrindra amin'ny zavatra rehetra izy ireo, dia manery ny tenanao hikatsaka ny hatsarana amin'izay rehetra ataonao, na inona na inona vidiny.
Matetika io dia ampahany amin'ny tsingerin'ny eritreritra izay mihodinkodina eo amin'ny fahombiazana - arakaraka ny ahatongavanao amin'ny zavatra dia arakaraka ny hamaritana ny fenitra arahinao, izay midika fa mila miasa mafy kokoa ianao mba hahatratraranao ny anao manokana tsy azo antenaina, andrasana .
9. Tsy mahazo aina amin'ny fahatokisan-tena ianao.
Afaka midera ny fahatokisan-tena amin'ny olon-kafa ianao, saingy mahatsapa fa toa tsy mahazo matoky tena ianao. Mihevitra ianao fa hihomehy anao ny olona na hanakiana anao noho ny fahasahisanao hatoky tena.
Alao sary an-tsaina fa ho hitan'ny olona ianao mampiseho fahatokisan-tena ary manontany tena hoe maninona no izany - manafina zavatra ve ianao, manonitra ny tsy fahombiazana lehibe? Mihorohoro ianao fa ho sendra ny fihetsikao amin'ny fomba ratsy, na inona na inona antony, manalavitra ny fatokisana.
10. Manimba anao ny fampitahana.
Ity hevitra ity dia mifandray amin'ny zava-misy fa izay mijaly amin'ny Imposter Syndrome dia matetika no mahatsapa ho toy ny hosoka. Ianao dia efa tsy matoky ny fahaizanao manokana, noho izany ny zava-misy mampitaha ny tenanao amin'ny hafa tsy tapaka tena tsy manampy.
Izay fahatsapana tsara mety hanananao ny tenanao dia esorina eo no ho eo ny faharoa manomboka mieritreritra momba azy ireo ianao! Mampitaha ny tenanao amin'ny namanao, rahalahinao, mpiara-miasa aminao ary mpiara-miasa aminao tsy misy farany ianao. Mandreraka ary fantatrao fa tsy mahasalama izany, saingy tsy azonao atao ny miala amin'ilay fahazarana.
famantarana manana fahatsapana ho anao izy
Arakaraky ny hidiranao ao anatin'ity tsingerin-tsaina ity no maharatsy azy. Farany dia miteny ratsy ny tenanao ianao noho izany fahatokian-tena ary izany dia mitarika fampitahana bebe kokoa fotsiny amin'ny hafa izay toa tsy miraharaha sy tsy misy fiatraikany amin'ny hevitry ny olona momba azy ireo. Izany dia mitarika ny tsimbadika ratsy farany ary mitazona anao ho voafandriky ny IS.
manampy namana amin'ny fisarahana
11. Ny lafy ratsy ihany no hitanao.
Sarotra aminao ny hanaiky fa misy ny lafy tsara amin'ny zavatra ataonao, indrindra satria atahorana ianao fa tsy atosiky ny fahombiazana. Tsy hitanao hoe firy ny zavatra tsara mandeha, na ny fahombiazanao, fa kosa ny mahita ny lafy ratsy amin'ny zavatra rehetra.
Satria voafandrika amin'ny tsingerin'ny fahatsapana tsy fahampiana ianao, dia tsy ho hitanao ny fomba mety hahitana zavatra tsara na mendrika na inona na inona ataonao. Arakaraka ny ifantohanao bebe kokoa amin'ireo negatives ireo, na MANANGANA izy ireo kosa, vao mainka mipoitra. Manamafy ny finoanao fotsiny izany fa hosoka ianao ary tsy mahay na inona na inona.
12. Ataonao ambanin-javatra ny anjara asanao.
Na ny anjara asanao amin'ny maha-ray aman-dreny, mpiara-miasa na namana anao dia mahatsapa ianao fa manao asa salantsalany. Mety manana ny andraikitrao lehibe indrindra ao anatin'ny orinasanao ianao, faingana dia esorinao ho toy ny zavatra 'azon'ny rehetra atao.'
Hitanao fa tsy afaka mino izany fa manao zavatra mendrika na sarotra ianao, koa ario ny zavatra ataonao ho zavatra isan'andro. Azonao natao ny nanangana ny balafomanga voalohany, saingy avelanao hohamarinina ho toy ny zavatra azon'ny ankizy atao izy io.
13. Manana fahatsapana sy eritreritra tsy mandanjalanja ianao.
Sarotra aminao ny mahita fomba fijery momba ny olana sasany, satria efa raiki-tampisaka amin'ny fomba fisainanao ianao. Ny olon-kafa mahita ny fiainanao ety ivelany ary samy manana ny fomba fijeriny an'ireo izay anananao momba azy.
Mety tsy hitanao ho zava-dehibe na mahaliana ny asanao na ny fialam-bolinao na ny fomba fiainanao, saingy tsy mandanjalanja ireo eritreritra ireo. Amin'ny tanjona, ny hafa hahita ny fiainanao ho mahomby sy feno hetsika sy hetsika mahaliana. Ny tsy fahaiza-mandanjalanja ao ambadiky ny fihetseham-ponao sy ny eritreritrao dia matetika vokatry ny fahatsapanao ho tsy ampy.
Rehefa avy namaky ireo teboka 13 ireo ianao, mieritreritra ve ianao fa mety hijaly amin'ny Imposter Syndrome?
ekeo ny olona amin'ny maha izy azy
maninona aho no tsy ampy fahaizana ho azy
rehefa ratsy toetra aminao ny olona
olona aleony irery
Midika inona izany
alice in Wonderland dia tezitra daholo isika eto